शोधनान्तर वचत ८ अर्ब ३० करोड | Business and Economy of Nepal
घरघरबाट उठ, टोल टोलबाट उठ ! लोडसेडिङ पक्षधर प्राधिकरण सञ्चालकलाई परास्त गर्न उठ ! #IamWithKulman bizmandu.com/content/-22120…Babukrishna	1 day ago
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसदमै सिमित राखौं। सडकमा ल्याएर तमासा नदेखाऊ सभासद्ज्यू। # ConstitutionAmendmentBabukrishna	2 days ago
one person followed me // automatically checked by fllwrs.comBabukrishna	3 days ago
RT @dhanrgrg: नागरिकता बितरण घुम्ती टोली खटाएर बिदेशीलाई नागरिकता दिएर मुलुकलाई क्रिमियाकरणको बाटोमा धकेल्न पाइन्न सरकार ।#NoMoreCitizanShi…Babukrishna	2 weeks ago
कुलमान घिसिङलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने युनियन नेतालाई कालोमोसो दलेर बजार घुमाउनुपर्छ। #IamWithKulmanBabukrishna	2 weeks ago
शोधनान्तर वचत ८ अर्ब ३० करोड
Posted on October 1, 2011 by Babukrishna	श्रावण महिनाको देशको आर्थिक स्थिति
काठमाडौ, (नेस) ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा समग्र शोधनान्तर स्थिति ८ अर्ब ३० करोडले बचतमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुग्दा वचतमा रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा चालू खाता ७३ करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता २ अर्ब ४२ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको थियो । खासगरी व्यापार एवं सेवा खातामा भएको सुधारका साथै विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिका कारण चालू खाता बचतमा रहन गई समग्रमा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहन गएको हो । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को पहिलो महिनामा सरकारी बजेट १० अर्व ९३ करोडले बचतमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व परिचालन उच्च रहेकोले सरकारी बजेट बचतमा रहेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी बजेट ४ अर्व ९७ करोडले बचतमा रहेको थियो ।
पहिलो महिनामा राजस्व परिचालन १४ दशमलब १प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अखर्ब १ करोड रुपियाँ पुगेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारलाई वैदेशिक नगद ऋणवापत् ५० करोड ९० लाख र वैदेशिक नगद अनुदानवापत् ३ अर्व ६६ करोड प्राप्त भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को साउन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलब ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति साढे ९ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकाङ्कमा ९ दशमलब ९ प्रतिशतले र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्कमा ५ दशमलब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमध्ये तरकारीको मूल्य सूचकांक सबैभन्दा बढी ३९ दशमलब ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै चिनी तथा मिठाई र दुग्ध पदार्थ एवम् अण्डाको मूल्य सूचकांक २० दशमलब ९ प्रतिशत र १६ दशमलब ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
गैर खाद्य तथा समूह समूहअन्तर्गत लत्ता कपडा तथा जुत्ता चप्पलको मूल्य १३ प्रतिशतले र यातायात क्षेत्रको सूचकांक १२ दशमलब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा सवैभन्दा वढी पहाडमा १० दशमलब ३ प्रतिशतले, तराईमा ६ दशमलब ९ प्रतिशतले र काठमाडौं उपत्यकामा ६ दशमलब ६ प्रतिशतले मूल्य सूचकाङ्कमा वृद्धि भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको नेपालको वस्तु व्यापार घाटामा ५ प्रतिशतले वृद्धि भई २६ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । साउन महिनामा नेपालले १७ दशमलब ९ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि गरी ६ अर्ब ७ करोड रुपियाँ कमाएको भए पनि आयातमा ७ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३२ अर्ब ७० करोड रुपियाँ बाहिर गएका कारण सो घाटा सिर्जना भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को पहिलो महिनामा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १६.९ प्रतिशतले घटी रू. ५ अर्ब १५ करोडमा सीमित भएको थियो । साउन महिनामा निर्यात–आयात अनुपात १८ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १६ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको थियो । Share this:EmailTweetPrintShare on TumblrLike this:Like Loading...
Filed under: Bank and Finance « बैंकले प्रज्ञापनपत्र नक्कली र सक्कली हो भन्ने जाँचेर बस्दैन पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पुनः बढ्यो »